Hilton Mandalay mepere taa na Myanmar
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere Myanmar » Hilton Mandalay mepere taa na Myanmar
Nịm n'etiti acres anọ nke ubi na-adịghị mma, Hilton Mandalay mepee taa, na-enye ulo di elu n'etiti obodo nke abuo kachasi elu ma kachasi eto. Iche ihu ugwu Mandalay Hill, nke bu ulo nke otutu pagodas na ebe obibi ndi mara mma nke obodo, tinyere ulo eze Mandalay di egwu, ebe ndi ozo na-enye ebe di nma iji nweta nleba anya kacha mma nke Mandalay.
Sean Wooden, osote onye isi ala, njikwa njikwa, Asia Pacific, Hilton kwuru, sị, "Dịka onye isi obodo bụbu nke Myanmar, Mandalay bụ ebe na-atọ ụtọ maka njem na njem njem n'otu n'otu na ụlọ ọrụ ya na-eju eju na ọtụtụ ọdịbendị, okpukpe na akụkọ ihe mere eme." "Anyị na-atụ anya ịgbasa ọnụnọ anyị na njem njem a na-achọsi ike ma mee ka Hilton mara ụwa ọbịa nke ọma na ndị njem na-aga Mandalay."
Hilton Mandalay na-enye ebe dị mma maka ndị njem na-achọ ịchọpụta ebe ndị mara mma n'obodo ahụ dịka Mandalay Hill, U Bein Bridge na Mahamuni Pagoda, yana ndị na-achọ inyocha ụfọdụ ebe ndị kachasị ewu ewu na Myanmar gụnyere obodo ochie nke Bagan, nke mara mma. ugwu ugwu nke Pyin Oo Lwin na ebube Inle Lake.
Hilton Mandalay na-enye ọmarịcha ọnọdụ na echiche dị egwu banyere Mandalay Palace na Mandalay Hill site na ime ụlọ ndị ọbịa 231. Ọtụtụ n'ime ụlọ ndị ọbịa na họtel nwere mbara ihu nkeonwe ma họrọ ime ụlọ nwere mbara sara mbara. Kitchenettes dị n'ọtụtụ ụlọ, na-eme Hilton
Mmemme agụmakwụkwọ na IMEX na-enye nghọta na mmụọ nsọ maka mmadụ niile
Machị 25 kwupụtara ụbọchị ụbọchị ụgbọ elu Hong Kong na San Francisco
Kazakhstan iji chọpụta njem ụgbọelu COVID-19 ọnọdụ tupu ikwe ka ọdụ ụgbọ elu banye